अष्ट्रेलियालाई टि-२० विश्वकपको उपाधि जिताउन नायक बनेका पाँच खेलाडी – Janasamsad
अष्ट्रेलियालाई टि-२० विश्वकपको उपाधि जिताउन नायक बनेका पाँच खेलाडी
२९ कार्तिक २०७८, सोमबार ११:५१ मा प्रकाशित
एजेन्सी । अष्ट्रेलियाले पहिलो पटक टि२० विश्वकपको उपाधि जितेको छ । आइतबार आइसिसी टि२० विश्वकप २०२१ को फाइनलमा अष्ट्रेलियाले न्युजिल्यान्डलाई ८ विकेटले हराउँदै च्याम्पियन बनेको हो । यसअघि अष्ट्रेलियाले पाँच पटक एकदिवसिय विश्वकप र दुई पटक च्याम्पियन्स ट्रफीको उपाधि जितेको थियो ।
प्रतियोगिता अघि अष्ट्रेलियालाई सेमिफाइनलमै पुग्न कठिन देखिएको थियो । तर उत्कृष्ट प्रदर्शनका साथ अष्ट्रेलियाले उपाधि नै जितेको छ । च्याम्पियन ट्याग फर्काएको छ । अष्ट्रेलिया सुपर १२ को समूह १ मा ५ खेलमा ४ मा जित र १ मा हार सहित दोस्रो स्थानमा रहेर सेमिफाइनल खेलेको थियो । अष्ट्रेलियाले सेमिफाइनलमा पाकिस्तानलाई ५ विकेटले हराउँदै फाइनलमा स्थान बनाएको थियो । समूह चरणमा दक्षिण अफ्रिकालाई ५ विकेटले हराएको थियो । इंग्ल्यान्डसँग भने अष्ट्रेलिया ८ विकेटले पराजित भएको थियो । श्रीलंकालाई ७ विकेट, बंगलादेश र वेस्टइन्डिजलाई ८–८ विकेटले पराजित गरेको थियो । अष्ट्रेलियालाई पहिलो पटक टि२० विश्वकप उपाधि जिताउन महत्वपूर्ण योगदान दिने पाँच खेलाडी :
विकेटकिपर म्याथ्यु वेड सेमिफाइनल खेलमा पाकिस्तानविरुद्ध टोलीको नायक बनेका थिए । पाकिस्तानलाई ५ विकेटले हराउँदै फाइनलमा पुर्याउन वेडले अन्त्यमा १७ बलमा २ चौका र ४ छक्का सहित ४१ रनको आक्रामक इनिङका साथ अविजित रहँदै प्लेयर अफ द म्याच चुनिएका थिए ।
एक समय सेमिफाइनलबाटै बाहिरिन लागेको अष्ट्रेलियालाई म्याथ्यु वेडले उत्कृष्ट प्रदर्शनका साथ फाइनलमा पुर्याएका थिए । त्यसैले अष्ट्रेलियालाई उपाधि जिताउन वेडको योगदान निकै महत्वपूर्ण छ । अष्ट्रेलियाले सहज जित हात पार्दा उनले अन्य खेलमा भने खासै ब्याटिङको अवसर पाएनन् ।
४. मिचेल मार्श
शीर्षक्रमका ब्याटर मिचेल मार्श फाइनलमा प्लेयर अफ द म्याच चुनिए । फाइनलमा अष्ट्रेलियालाई सहज जित दिलाउन मार्शले ५० बलमा ६ चौका र ४ छक्का सहित ७७ रनको अविजित इनिङ खेलेका थिए । मार्शले शीर्षक्रममा विश्वकपमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरे ।
यसअघि सेमिफाइनलमा पाकिस्तानविरुद्ध २८ रनको महत्वपूर्ण इनिङ खेलेका थिए । वेस्टइन्डिजविरुद्ध ५३ र बंगलादेशविरुद्ध १६ रनमा अविजित थिए । मार्शले ५ इनिङमा कुल १ सय ८५ रन बनाएका थिए । अष्ट्रेलिया च्याम्पियन बन्नुमा उनको पनि योगदान महत्वपूर्ण छ ।
३. जोश हेजलवुड
अष्ट्रेलियालाई पहिलो पटक टि२० विश्वकपको उपाधि जिताउन तीव्र गतिका बलर जोश हेजलवुडको प्रदर्शन महत्वपूर्ण रह्यो । हेजलवुडको उत्कृष्ट प्रदर्शनमा अष्ट्रेलियाले सहज रुपमा उपाधि जित्यो । फाइनलमा न्युजिल्यान्डविरुद्ध हेजलवुडले ४ खेलमा १६ रन खर्चेर ३ विकेट लिएका थिए ।
नयाँ बलका साथ हेजलवुडले पावर प्लेमा लगातार विकेट लिएका थिए । हेजलवुडले ७ खेलमा २४ ओभर बलिङ गर्दै १ सय ७५ रन खर्चेर कुल ११ विकेट लिए । हेजलवुड वेस्टइन्डिजविरुद्ध ४ ओभरमा ३९ रन खचेर ४ विकेट लिएका थिए । पहिलो खेलमा दक्षिण अफ्रिकालाई ५ विकेटले हराउन हेजलवुडले ४ ओभरमा १९ रन खर्चेर २ विकेट लिँदै प्लेयर अफ द म्याच चुनिएका थिए ।
२. एडम जाम्पा
स्पिनर एडम जाम्पाले युएईको पिचको राम्रोसँग सदुपयोग गरे । यस विश्वकपमा सर्वाधिक विकेट लिने खेलाडीको सूचिमा दोस्रो स्थानमा रहेका जाम्पाले प्रतियोगिता भर उच्च प्रदर्शन गरे । जाम्पाले ७ खेलमा २७ ओभर बलिङ गर्दै १ सय ५७ रन खर्चेर १३ विकेट लिए । जाम्पाले मध्यक्रममा निरन्तर विकेट लिदै विपक्षीलाई सस्तैमा समेटेका थिए ।
जाम्पाले बंगलादेशविरुद्ध ४ ओभरमा १९ रन खर्चेर ५ विकेट लिँदै प्लेयर अफ द म्याच चुनिए । दक्षिण अफ्रिका र श्रीलंकाविरुद्ध २–२ विकेट लिएका थिए । जाम्पाले विश्वकपमा सबै खेलमा निरन्तर विकेट लिएका थिए । अष्ट्रेलिया कप्तान आरोन फिन्चले फाइनल पछि आफ्नो लागि जाम्पा प्लेयर अफ द टुनामेन्ट समेत रहेको बताएका थिए ।
१. डेविड वार्नर
अष्ट्रेलियालाई उपाधि जिताउन ओपनर डेविड वार्नरको प्रदर्शन निकै महत्वपूर्ण रह्यो । प्रतियोगिता सर्वोत्कृष्ट खेलाडी चुनिएका वार्नरले उच्च प्रदर्शन गरे । प्रतियोगिता अघि खराब लयका साथ आलोचना समेत खेपेका वार्नरले आलोचकलाई जवाफ दिँदै अष्ट्रेलियालाई टि२० विश्वकप च्याम्पियन बनाए ।
वार्नरले ७ खेलमा ३ अर्धशतक सहित २ सय ८९ रन बनाएका थिए । फाइनलमा वार्नरले ३८ बलमा ४ चौका र ३ छक्का सहित ५३ रनमा आउट भएका थिए । वार्नरले सेमिफाइनलमा पाकिस्तानविरुद्ध ३० बलमा ३ चौका र ३ छक्का सहित ४९ रनको महत्वपूर्ण इनिङ खेलेका थिए । समूह चरणमा वेस्टइन्डिज विरुद्ध ८९ र श्रीलंकाविरुद्ध ६५ रनको इनिङ खेलेका थिए । दक्षिण अफ्रिकाविरुद्ध १४, इंग्ल्यान्डसँग १ र बंगलादेशविरुद्ध १८ रनमा आउट भएका थिए ।
युवा संघ मेचीनगरको प्रथम अधिवेशन सम्पन्न
ओखलढुंगामा तीर्थालु बोकेको जीप दुर्घटना हुँदा ४ जनाको मृत्यु